China 5ml 10ml ukuvuza ubungqina intsimbi mqengqeleki ibhola iglasi roll iziqholo mveliso kunye nabathengisi | Jiamei
Imibala ye-5ml ye-10ml evuzayo yesinyithi esineglasi yebhola yeglasi kwiibhotile zeziqholo
Ukuphatha umphezulu: UKUPHRinta KWESIKRAYI
Ukusetyenziswa kweMizi-mveliso: ukhathalelo lomntu
Uhlobo lokutywina: Qengqeleka phambili
Inombolo yomzekelo: BMA0VC0R005
Igama lebrand: Blossom
Umthamo: 5ml 10ml
Isampuli: Inikwe ngokukhululekileyo
Umbala webhotile: Luhlaza okwesibhakabhaka okanye ngokwesiko
Ilogo: ngentando yakho logo
Ubukhulu: 60 * 15mm
Mveliso 1.Direct kunye ixabiso kukhuphiswano, ukunika abathengi izisombululo ukuphakheja kwezoqoqosho.
2.Iinjineli ezinamava, zenza iibhotile zeglasi ezisemgangathweni.
LOGO Elungiselelweyo inokuprintwa
5.Nika isaphulelo xa une- $ 1000
Iimpahla 6.Deliver ngexesha.
Iimpawu: -Iglasi ikhusela ngokuchasene nemitha ye-UV eyingozi. -Ibhotile yeglasi enganyangekiyo ngumhlwa, ibhola ebonakalayo kunye neyomeleleyo- Ifanelekile ukuba ihambe, kulula ukuyiphatha, iyaphinda iphinde ibenako, iphatheka kwaye ilungeleke. -Kulungele ukulayishwa kweoyile eyahlukeneyo, njengeoyile eyimfuneko yeoyile, ioyile yemifuno, isitshixo, iziqholo, njl njl. - Isetyenziselwa izandla, ubuso kunye namanye amalungu omzimba.
round, Isilinda, customzied
Igolide, isilivere, mnyama
yoshicilelo screen, ileyibhile intonga
Inkqubo umphezulu Cap
Inkqubo umphezulu logo
Ukunyathela okushushu, ukuPrinta kwesikrini, ukuhla
I-Alibaba Order Assurance Order, i-Paypal, i-T / T, i-Western Union, i-Money Gram, iKhadi letyala, njl
100pcs, kwaye ukunika isampuli.
ioyile eyimfuneko, isampulu yeziqholo, ulwelo lwezithambiso olufana nekhrimu, into yokuthambisa, isiseko, i-serum, i-primer, i-concealer, ukhathalelo lolusu, njl njl.
1) Iisampulu zeendleko: ngaphandle kwentlawulo
2) ixesha Lead: 1-2days
3) I-QTY: I-PC ze-1-5
1) Iisampulu ezenziwe ngokwezifiso i-50-100 iidds zibandakanya ukuhlawulwa ngokucacileyo
2) ixesha Lead: iintsuku 7-10
Umyalelo Bulk Ixesha Lead
Kuxhomekeke kwimeko eyiyo yemveliso. Ngokwesiqhelo kwiintsuku ezingama-30 emva kokuba iisampulu ziqinisekisiwe. Iintsuku ezingama-35-40 emva kokufumana idiphozithi
iplastikhi, shwabanisa, ibhokisi ye-pvc, ibhokisi yephepha, iphepha lokwahlula, ibhokisi, pallet
ukuveza iintsuku ezi-5-45, inqanawa 7-55days, ngokwedilesi yakho
I-ASTM / CPSC / SGS / MSDS
Ibhotile yinto engenanto enokuphinda yenziwe kwaye ilungele ukusetyenziswa kunye nokugxotha, ukugxotha iingcongconi, ikrimu, ukufuma, ukuthambisa iioyile ezifanelekileyo, ioyile yeziqholo okanye ezinye izinto ezingamanzi.
Inkangeleko yebhotile ilula kwaye inesisa, umlomo uthe tyaba, ezantsi ligudile, ubukhulu bodonga buyinto efanayo, ubumhlophe buqaqambile, ukutywina kunamandla, kwaye umgangatho wemveliso unokugcinwa ngcono.
Ubungakanani begubu buvumela ukungqubana okungcono kunye nolwelo ngaphandle kwenkunkuma eninzi, ikepusi yenza ukuba ibhotile ivalwe ngokuqinileyo kwaye kuthintele imveliso ekuvuzeni.Easy ukuyicoca nokuyisebenzisa kwakhona.
iglasi ibhotile oyile
Amandla: 10 ml
Umbala 1: Mnyama
Umbala 2: Isilivere
Iibhotile ezimbini ezivulekileyo
Ilungele iioyile ezifanelekileyo, iziqholo, iziqholo kunye nokukhuselwa kwimitha eyingozi
[Ibhola]: Ibhola yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu engenazingxaki, ukunganyangeki ukubola, kwaye kuthintela nakuphi na ukuvuza
[Ubungakanani besalathiso]: Isilivere negolide, inokugcina ulwelo oluyi-10 ml; Ibhotile ine-7.7 cm ubude ne-17 mm ububanzi. Ubungakanani obuphathekayo bulungele ukuphuma okanye ukuhamba. Nceda ubhekise kumfanekiso wentengiso
[Isetyenziswa ngokubanzi]: Umthamo we-10ml ukuvumela ukuba ugcine iioyile zendalo, iiserum, iziqholo okanye ezinye izinto ezingamanzi kwiimfuno zakho zemihla ngemihla zokhathalelo lolusu, ezilungele ukuhamba kwaye kulula ukuziphatha kwisipaji sakho
Egqithileyo Ibhotile yeglasi enemibala eyi-10ml ilungele iziqholo zeoyile ebalulekileyo. Isinyithi ibhola yesinyithi kulula ukuyilayisha kulusu
Okulandelayo: Luxury 5ml 10ml 15ml gemstone mqengqeleki ibhola iglasi yikristale kubalulekile oyile ibhotile